Ngabe imali mboleko ka-Pay Day embozwe ukuqothuka? - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Imibuzo Evame Ukubuzwa/ Ngabe imali mboleko ka-Pay Day embozwe ukuqothuka?
Ngabe imali mboleko ka-Pay Day embozwe ukuqothuka?
Uma ukhiphe imalimboleko yosuku lokuhola, bayathethelelwa ngokuqothuka. Izinkinga zingavela ukuthi uma imalimboleko yosuku lokukhokha yathathelwa ezinsukwini zethu ze-90 badinga ukubuyiselwa. Noma yisiphi isikweletu esivele ngaphakathi kwezinsuku ze-90 zokuqothuka kungenzeka sidinge ukubuyiswa.
Uma ufayela ukuqothuka futhi unamasheke ebhalwe phansi aphelelwa yindawo yemalimboleko yePay Day ungangena enkingeni nenkampani yemalimboleko yokukhokha isazama ukufaka amasheke akho. Uma uzithola ulolu hlobo lwesimo, khuluma no ummeli wokusiza isikweletu ukwenza izinketho zakho.
Ngabe ukuphepha kwezenhlalo kubhekwa njengokuhola imali njengokuqothuka?
Kwenzekani uma ngishiya okweletayo engiphathekile ngenxa yokuqothuka kwami?